အရမ်းစိတ်ညစ်နေတဲ့ သူတွေ ဖတ်ကြည့်ပါ။ စာလေးကို စိတ် အရမ်းညစ်နေတဲ့ သူတွေ ၊ လက်ရှိ အခြေအနေတစ်ခုမှာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးပေး ထားလို့ ဖတ်ကြည့်စေချင် ပါတယ် ။
လောကမှာ ကိုယ့်ကို စိတ်ညစ် အောင်လုပ်တာလည်း '' ကိုယ်ပါပဲ ''
ကိုယ် ကို ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေး နိုင်တာလည်း '' ကိုယ်ပါပဲ ''
ကိုယ့် ကို အောင်မြင်အောင် လုပ်နေတာလည်း '' ကိုယ်ပါပဲ ''
ကိုယ့် ကို ကျရှုံးအောင် ပြန်လုပ်တာလည်း '' ကိုယ်ပါပဲ ''
အဓိက က ကိုယ့်ရဲ့ '' စိတ် '' ပါပဲ။ စိတ် ဆိုတာ အရမ်းကြောက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
'' စိတ် '' ကောင်းထားတတ်ရင် တန်ဖိုး ရှိတဲ့ '' ဆေးတစ်ခွက် '' ဖြစ်နိုင်ပြီး မကောင်းတဲ့ '' စိတ် '' တွေ ထားမယ် ဆိုရင်တော့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ '' ဘေး '' အန္တရာယ် တစ်ခု ဖြစ်သွားနိုင် ပါတယ် ။
ကဲ… အဲ့တော့ အရေးအကြီး ဆုံးက မိမိကိုယ် မိမိ စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားဖို့နဲ့ တန်ဖိုး ရှိအောင် နေထိုင်ဖို့ပဲ မဟုတ်လား ။
ဥပမာ - ရေနွေးပူ တစ်ခွက်ကို သင် ကြာကြာ ကိုင်ထားကြည့် လိုက်ပါ။ သင်ကိုင်ထားသ၍ ကတော့ အဲ့ဒီ '' အပူဒဏ် '' ကို ကြိတ်မှိတ်ပြီး ခံစားနေရဦး မှာပဲ။ သင် လွှတ်ချနိုင် လိုက်မှသာ သင်အပူဒဏ်နဲ့ ဝေးသွားပြီး အဆင်ပြေသွားမှာ ဖြစ်တယ်။
ဒီလိုပဲ.. သင်မှာ ရှိတဲ့ စိတ်ညစ်စရာ တွေကို သင်တွေးနေသ၍ စိတ်ညစ်စရာတွေဟာ ပိုကြီးထွား လာပြီး.. သင်ဆက်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲနေရ ဦးမှာပါ ။ ဒါတွေကို မတွေးတော့ပဲ.. ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း ရှာမှသာ အဆင်ပြေမှာပါ။
တစ်ချို့က အိမ်အတွက် စိတ်ညစ်ကြတယ်။ တစ်ချို့က ချစ်သူရည်းစားအတွက် ၊ တစ်ချို့က အလုပ်အတွက် ၊ ငွေကြေး ပြသနာ အတွက် အစရှိတဲ့ စိတ်ညစ်မှု မျိုးစုံပေါ့။ ဒါတွေကို ထိုင်ပြီးတော့ စိတ်ဆင်းရဲ နေတာ ကိုယ်ကိုယ်ကို ပြစ်ဒဏ် ပေး အကျဉ်းချ နေတာပါ။ အဓိက ဘာလုပ်ရမှာလည်း ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ နည်းလမ်း ရှာဖို့ပါပဲ။
အကျိုးရှိရင် အကြောင်း ရှိသလို ၊ အခက်အခဲ ရှိရင် ဖြေရှင်းလို့ရမဲ့ နည်းလမ်း ဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။ သင်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ၊ ၃ နှစ် တုန်းကလည်း စိတ်ညစ်ဖူး မှာပါ။ ဒါတွေက ခုချိန်မှာ ရယ်စရာ တစ်ခု သာသာ ဖြစ်သွားတာပဲလေ ။ အတွေ့အကြုံ နဲ့ သင်ခန်းစာ ဖြစ်သွားတာပဲလေ ။
အပျော်တွေနဲ့ပဲ နေပါ။ အပျော်တွေကို ဖန်တီးပါ။ စိတ်ကို တတ်နိုင်သလောက် ပျော်အောင်ထားပါ ။ လောကကြီးက စိန်ခေါ်မှုတွေ အရမ်း များတယ်။ ဆုံးရှုံးမှု့ဒဏ်တွေ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှု ဒဏ်တွေကို သင်မခံနိုင်ရင် စိန်ခေါ်မှုတွေ များတဲ့ လောကကြီးကို ဘယ်လို ဆက်ပြီး ရင်ဆိုင်မလဲ ?
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံတဲ့ နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းမှာလား ?
ဒါဆို သင် လုံလောက်တဲ့ ရင့်ကျက်မှု မရှိသေးလို့ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ လုံလောက်တဲ့ ရင့်ကျက်မှု ရှိသူတိုင်းဟာ ကိစ္စတိုင်းကို ထည့်တွက် မနေကြပါဘူး။ ပူလောင်မှု ကို ခံစားနေရတယ် ဆိုတာ မေတ္တာစိတ် မရှိလို့ပါ။ ပြီးတော့ အတ္တစိတ် ကြီးနေတာ မိမိကိုယ် မိမိ ချစ်တာ ၊ မိမိ လောဘ ကို မိမိ မြှောက်ပေးနေတာ ၊ မိမိ မာန ကို ရှေ့တန်း တင်ပေးနေတာ။ ဒီတော့ ဒါတွေ မဖြစ်အောင် ၊ သင်စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ ဝေးသွားအောင် ဒီလိုစိတ်ထားကြည့်ပါ။
( ၁ ) ခွင့်လွှတ် နားလည် ပေးကြည့်ပါ
( ၂ ) ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ကြည့်ပါ
( ၃ ) အကောင်းမြင်စိတ်လေးနဲ့ အကောင်းမြင်ပေးပါ
အရင် ငြိမ်းချမ်းသွားမှာက သင်ပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အမှားကို မေ့ပစ်ခြင်းဟာလည်း အကောင်းဆုံး ဂလဲ့စား ချေခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ ။ ကံဆိုးမ သွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာ တဲ့ မိုးလည်း ( ၁၂ ) ရာသီ လုံး လိုက်မရွာ နိုင်ပါဘူး။ ( သူလည်း အားချင်မှ အားမှာလေ )
မုန်တိုင်း ပြီးရင်တော့ လေပြေ ရောက်လာ စမြဲပါ။ အကောင်းဆုံးတွေ လာဖို့ အဆိုးတွေ အရင် လာလည်တာပါ။ နေရိပ် ကို လိုချင်လို့နေပူထဲ ရပ်စောင့် နေရပါလား လို့ အကောင်းမြင်စိတ် လေးနဲ့ တွေးကြည့်ပါ။
ငါ ' ပေ ' ဖြစ်နေလို့ခံနေရတာ ' တူ ' ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ် မွေးကြည့်ပါ ။ လူဘဝ ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ ခဏတာ လေးပါ ။ အဲ့ထဲမှာ သင်က..
ထမင်းစားဖို့အသက်ရှင်နေတာလား ? အသက်ရှင်ဖို့ ထမင်းစားနေတာလား ? ဆိုတာ အရင် တွေးပါ ။ ကာဗွန် ခြင်း တူရင်တောင် မီးသွေး အဖြစ် မခံပါနဲ့ ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စိန် ပဲ ဖြစ်အောင်ပဲ ကြိုးစားပါ ။
သင်အလုပ်တွေ လုပ်နေရင်းနဲ့ ပညာတွေ ဆက်ရှာပါ။ အမြဲမပြတ် လေ့လာပါ ၊ သင်ယူပါ ။ ပြီးတော့ လူသားတွေ ကို အကျိုးပြု နိုင်တဲ့ ပရဟိတတွေ များများ လုပ်ပါ။ များများ လှူပါ ၊ ကူညီပါ ၊ ဖေးမပါ ၊ စိတ်ကောင်းထားပါ။ ရိုးသားစွာ ကြိုးစားပါ ။
ကဲ… ဒါဆို သင် ဘဝတစ်ခုလုံး အတွက် တန်ဖိုး ရှိစွာ နေထိုင်နိုင်တဲ့ ' လူ ' တစ်ယောက် ဖြစ်သွားနိုင်ပါပြီ ။